Deeq sano 3 5 bilood ka hor #25
Miyaad deyn qaadataa ama kaararka ATM-yada ee deeqda?
Laga soo bilaabo waxa aan fahamsanahay, waxay u egtahay inaan WAXA KU JIRO kuugu deeqday adoo adeegsanaya USPS Boostada. Ma sax baa?
Deeq sano 3 5 bilood ka hor #26
Hadda waxaan haystaa KLAX, WAXAA LEEYAHAY! SOoooooo Waxaad heysataa FAN !!!!
Deeq sano 3 5 bilood ka hor #28
Waad ku mahadsantahay fariintaada, waan ku faraxsanahay inaan ku caawino.
Haddii aad rabto inaad sameysid deeq-bixin waxaad isticmaali kartaa nidaamkayaga halkan http://www.rikoooo.com/more/donate
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Gh0stRider203, qashinka
Deeq sano 3 5 bilood ka hor #80
Hedupitsbutt ayaa qoray: Hadda waxaan haystaa KLAX, WAXAA ISKU DARAY! SOoooooo Waxaad heysataa FAN !!!!
Waxaa dhici karta in aad u egtahay aniga oo ah ...... Rikoooo qaboojiye hehe
Deeq sano 3 4 bilood ka hor #173
ma waxaan ku deeqi karnaa qayb ka mid ah anatomy superskullmaster si ay u yeeshaan nidaam sida Chuka ??? ^ _ ^ (wuxuu hore u sheegay inuu siin lahaa hal qayb, waxaan siin doonaa kan kale si uu u yeesho mid la mid ah lol)